आफ्नै बुबाले श्रीमती र छोरीलाई टो’केर मा’रे,झारफुकको अन्धविश्वास कहिलेसम्म ?(भिडियो हेर्नुहोस्) – GALAXY
आफ्नै बुबाले श्रीमती र छोरीलाई टो’केर मा’रे,झारफुकको अन्धविश्वास कहिलेसम्म ?(भिडियो हेर्नुहोस्)
इलाम जिल्लाको देउमाई नगरपालिका ५ धुसेनीमा एक ब्याक्तीले टो’केर आफ्नै श्रीमती र छोरिको ह”त्या गरेको बताइएको छ । गए राती भएको उक्त घटना स्थानियहरुले बिहान करिब ३ बजे तिर मात्र थाहा पाएका थिए ।
झारफुक गर्ने भन्दै भएको उक्त घट’ना निकै ड’रलाग्दो भएको छ । अन्धबिस्वासमा अझै पनि नेपाली समाजमा धेरैले ज्या’न गुमाउने जोखिम रहेको छ । किनकी हाम्रो समाजमा अझै पनि थुप्रै मानिसहरु धामीझाँक्री कै भरमा उपचार गर्नेहरु छन ।
देउमाई नगरपालिका ५ धुसेनी घर भएका ३४ वर्षीय एक पुरुषले आफ्नै ३५ वर्षीय श्रीमती र एक छोरिको टो’केर ह’त्या गरेको खुलेको छ ।
अघिल्लो दिन मात्र आमा छोरी दुबैको शरीरमा चुडे’ल बसेको भन्दै एक जना धामिले भने पछि उक्त दिन झारफुक गर्न बाबा, आमा र दिदी बसेको कान्छी छोरिले बताएकी छिन । झारफुक गर्ने क्रममा आमा र दिदिको छाती लगायतका ठाउँमा टो”केको उनको भनाई छ । त्यसो हुँदै गर्दा आफू खाना खाएर टेलिभिजन केही बेर हेरेर सुतेको उनले बताईन ।
आफुले भोलिपल्ट बिहान मात्र आमा र दिदी ल’डिरहेको थाहा पाएको उनको भनाई रहेको छ । स्थानिय एक महिलाका अनुसार भने आमा छोरी सगैँ उनिहरुको बिचमा उनिहरुकै घरमा पालिएको कुकुर पनि मृत भेटिएको थियो ।
बिहान ४ बजे तिर सबै क’राएको सुनेर आफू पनि हेर्न जादाँ आमा छोरि र बिचमा कुकुर ल”डिरहेको देखेको ती महिला बताउँछिन । तर ती ह”त्या गर्ने पुरुष भने त्यहा नभएको उनले बताईन । गाउँलेले केही तल कतै जदै गरेको देखेको बताएको उनको भनाई छ ।
आफुले घर भित्र नजिकै गएर नहेरेको भएता पनि बाहिरैबाट हेर्दा उनिहरु नांगै भएको बताईन । कम्मर माथी कुनै कपडा नभएको अवस्थामा दुबै आमा छोरी भेटिएका थिए ।
उनिहरुको स्तनको वरिपरि टो’केर घा’उ बनेको आफुले देखेको उनले बताएकी छिन । दुबै आमा छोरिको नै उस्तै घाउ भएको उनको भनाई थियो । अन्य स्थानीयले जनाए अनुसार भने दुबै आमा छोरिको स्तनमा टो’किएको साथै घाँटी र जिब्रो पनि टो’किएको अवस्था रहेको बताएका छन । साथै कुकुरलाई पनि टो’केरै मा’रेको उनिहरुको भनाई छ ।
तर ती महिलाका अनुसार भने ती ब्याक्ति मा’नसिक रोगी हुन सक्ने बताएकी छिन । उनले आफुले पनि धेरै समय यस्तै अवस्था आफ्नै घरमा भोगेको भन्दै अन्य कुराहरु बाहिर आए पनि उनी मान’सिक रोगी भएकै कारण यस्तो गरेको हुन सक्ने उनको भनाई छ ।
आफ्ना श्रीमान पनि लामो समय मानसिक रोगबाट ग्रसित भएर यस्तै ब्याबहार गर्ने गरेको उनले बताईन । आफ्नो श्रीमानले पनि बो’क्सी लाग्यो भन्दै आफ्नै छोराछोरीलाई त्यस्तै ब्याबहार देखाउने गरेको आफुले भोगेको भएर अहिले यहाँ पनि यस्तै भएको उनको बुझाई छ । (भिडियो हेर्नुस)